1 IziKronike 28:1-21
28 UDavide wabuthela eJerusalema zonke izikhulu+ zakwa-Israyeli, izikhulu+ zezizwe nezikhulu+ zezigaba zalabo ababekhonza inkosi nezinduna zezinkulungwane+ nezinduna zamakhulu+ nezinduna zayo yonke impahla+ nemfuyo+ yenkosi neyamadodana ayo,+ kanye nezikhulu zegceke+ namadoda anamandla,+ yebo wonke amadoda angamaqhawe, anamandla. 2 Khona-ke uDavide inkosi wasukuma wema ngezinyawo wathi: “Ngizweni, bafowethu nabantu bami. Kimi, kwakuthandeka enhliziyweni yami+ ukwakha indlu yokuphumula yomphongolo wesivumelwano sikaJehova futhi ibe yisenabelo sezinyawo+ sikaNkulunkulu wethu, futhi ngase ngikulungiselele ukwakha.+ 3 Kodwa uNkulunkulu weqiniso ngokwakhe wathi kimi, ‘Ngeke wakhele igama+ lami indlu; ngoba ungumuntu wezimpi, futhi uye wachitha+ igazi.’ 4 Ngakho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wangikhetha kuyo yonke indlu kababa+ ukuba ngibe yinkosi+ phezu kuka-Israyeli kuze kube nini nanini; ngoba nguJuda amkhetha njengomholi,+ futhi endlini kaJuda wakhetha indlu+ kababa, naphakathi kwamadodana+ kababa, yimi amamukela,+ ukuba angibeke inkosi phezu kuka-Israyeli wonke; 5 futhi kuwo wonke amadodana ami (ngoba maningi amadodana uJehova anginiké+ wona) wabe esekhetha uSolomoni+ indodana yami ukuba ahlale esihlalweni sobukhosi+ bukaJehova phezu kuka-Israyeli. 6 “Ngaphezu kwalokho, wathi kimi, ‘USolomoni indodana yakho nguye oyokwakha indlu yami+ namagceke ami; ngoba ngikhethé yena ukuba abe yindodana yami,+ futhi mina ngizoba nguyise.+ 7 Ngokuqinisekile, ngiyobumisa buqine ubukhosi+ bakhe kuze kube nini nanini uma eyozimisela ngokuqinile ukwenza imiyalo+ yami nezinqumo zami zokwahlulela+ njengakulolu suku.’ 8 Manje, ngaphambi kwamehlo ka-Israyeli wonke, ibandla+ likaJehova, nasezindlebeni zikaNkulunkulu+ wethu, qaphelani futhi nifune yonke imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu, ukuze nidle ifa laleli zwe+ elihle futhi ngokuqinisekile nikwazi ukulidlulisela njengefa emadodaneni enu ngemva kwenu kuze kube nini nanini. 9 “Wena, Solomoni ndodana yami, yazi+ uNkulunkulu kayihlo futhi umkhonze+ ngenhliziyo ephelele+ nangomphefumulo ojabulayo;+ ngoba uJehova uhlola+ zonke izinhliziyo, futhi ubona+ konke ukuthambekela kwemicabango. Uma umfuna, uyozenza atholakale kuwe;+ kodwa uma umshiya,+ uyokulahla kuze kube phakade.+ 10 Manje, bheka, ngoba uJehova ngokwakhe ukukhethile ukuba umakhele indlu njengendlu engcwele. Yiba nesibindi uthathe isinyathelo.”+ 11 UDavide wanika uSolomoni indodana yakhe umklamo wokwakha+ umpheme+ nezindlu zawo namakamelo awo okugcina izimpahla+ namagumbi awo asophahleni+ namakamelo awo angaphakathi amnyama nendlu yesembozo esiyisihlawulelo;+ 12 yebo umklamo wokwakha zonke izinto awuthola ngokuphefumulelwa,+ umklamo wamagceke+ endlu kaJehova nowawo wonke amakamelo okudlela+ ayenxazonke, ingcebo yendlu kaNkulunkulu weqiniso nayo yonke ingcebo yezinto ezazingcwelisiwe;+ 13 nowezigaba+ zabapristi nezamaLevi nowawo wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova nowazo zonke izinto zenkonzo yendlu kaJehova; 14 nowegolide ngesisindo, igolide lazo zonke izinto zezinkonzo ezihlukahlukene, nowazo zonke izinto zesiliva ngesisindo, lazo zonke izinto+ zezinkonzo ezihlukahlukene; 15 nesisindo sezinti zezibani+ zegolide nezibani zazo zegolide, ngesisindo sezinti zezibani ezihlukahlukene nezibani zazo, nowezinti zezibani zesiliva ngesisindo sothi lwesibani nezibani zalo ngokwenkonzo yezinti zezibani ezihlukahlukene; 16 negolide ngesisindo, lamatafula ezinkwa ezibekwa ngezinhla,+ lamatafula ahlukahlukene, nesiliva lamatafula esiliva; 17 nezimfoloko nezitsha+ nojeke begolide elihlanzekile, nowezitsha ezincane zegolide+ ngesisindo sezitsha ezincane ezihlukahlukene, nowezitsha zesiliva ezincane ngesisindo sezitsha ezincane ezihlukahlukene; 18 negolide elicwengekileyo ngesisindo, le-altare+ lempepho nelowomfanekiso wenqola,+ okungukuthi, amakherubi+ egolide ukuba elule amaphiko awo asibekelé umphongolo wesivumelwano sikaJehova. 19 “Wanikeza ukuqondisisa ngayo yonke into ngokuyibhala+ ivela esandleni sikaJehova esiphezu kwami, ngisho nangayo yonke imisebenzi yomklamo wokwakha.”+ 20 UDavide waqhubeka wathi kuSolomoni indodana yakhe: “Yiba nesibindi+ uqine futhi uthathe isinyathelo. Ungesabi+ noma wethuke,+ ngoba uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu wami, unawe.+ Ngeke akulahla+ noma akushiya uze uqedwe wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova. 21 Futhi nazi izigaba zabapristi+ nezamaLevi+ ezizokwenza yonke inkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso; futhi kanye nawe kuwo wonke umsebenzi kukhona wonke umuntu othandayo+ onekhono layo yonke inkonzo,+ nezikhulu+ nabo bonke abantu, abazokwenza wonke amazwi akho.”